२ महिनामा सवा ८ सय कर्मचारी विदेश भ्रमणमाः कुन मन्त्रालयका कति गए ? (विवरणसहित) – Everest Dainik – News from Nepal
२ महिनामा सवा ८ सय कर्मचारी विदेश भ्रमणमाः कुन मन्त्रालयका कति गए ? (विवरणसहित)
चालू आव २०७५–७६ को पहिलो २ महिना (साउन र भदौ) मा नै सवा ८ सय कर्मचारी विदेश भ्रमणमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार २२ वटा मन्त्रालयका उक्त संख्याका कर्मचारी विदेश गएका हुन् ।
सो अवधिमा रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा गएका छन् भने सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कर्मचारी रहेका छन् । रक्षा मन्त्रालयका २ सय ९ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका हुन् भमि व्यवस्था मन्त्रालयका १ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबै निकायहरूसँग विदेश भ्रमण गएका कर्मचारीको विवरण माग गरेको थियो। कार्यालयले केही समयअघि पत्र नै पठाएर वैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारीको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
जथाभावी वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रवृत्तिले अभिलेख समेत नरहने र राज्यको बजेट खर्च हुने भएकाले व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक रहेकाले विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको विवरण माग गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थित गर्न गत बैशाखमा सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको थियो।
कुन मन्त्रालयका कति कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गए ?
धनुषा बम विस्फोटः इन्स्पेक्टर दाहाल १४ वर्ष झलनाथ खनालका निजी सुरक्षा अधिकारी रहेका
ए डिभिजन लिगः मछिन्द्र क्लबको विजयी सुरुवात